Inkqubo yemithambo-luvo esemathunjini (iboniswe ngombala oluhlaza)
Inkqubo Yemithambo-luvo Esemathunjini—Ngaba ‘Yingqondo Yakho Yesibini’?
ZINGAPHI iingqondo onazo? Unyanisile ukuba uthi “inye”. Sekunjalo, umzimba wakho unezinye iinkqubo zemithambo-luvo. Umzimba womntu unenye inkqubo yemithambo-luvo esebenza kakuhle kakhulu kangangokuba abanye oososayensi bade bathi xa beyibiza “yingqondo yesibini.” Yona ayikho sentloko kodwa isemathunjini.
Ukutshintsha ukutya okutyileyo kube ngamandla emzimbeni akuyondlwan’ iyanetha. Ingqondo, iyekela le nkqubo yemithambo-luvo isemathunjini ukuba iwenze ngokwayo lo msebenzi.
Nakuba ingantsokothanga ukodlula ingqondo, le nkqubo nayo kunzima ukuyiqonda kakuhle. Kuqikelelwa ukuba eyomntu ineeneurons ezimalunga nezigidi eziyi-200 ukuya kutsho kweziyi-600. Ezi neurons zintsokothe kangaka zifumaneka kumalungu acola ukutya emzimbeni. Oososayensi bathi ukuba lo msebenzi wenziwa yile nkqubo yemithambo-luvo ubusenziwa yingqondo, bekuya kufuneka imithambo-luvo ibe mide kakhulu. Incwadi iThe Second Brain, ithi “yeyona ndlela ilula nekhuselekileyo ukuba yonke into enokwenza nokucolwa kokutya yenziwe yinkqubo yokucolwa kokutya (digestive system)
“INDAWO EGCINA IMICHIZA”
Xa umzimba ucola ukutya, kuye kufuneke imichiza efanelekileyo kwiindawo ezahlukeneyo kanye ngexesha efuneka ngalo. UProfesa Gary Mawe uyichaza kakuhle inkqubo yokucolwa kokutya xa esithi “yindawo egcina imichiza.” Indlela esebenza ngayo le michiza ibangela umdla ngeyona ndlela. Ngokomzekelo, emathunjini kukho iiseli ezikhethekileyo, ezikwaziyo ukuva ukuba ngowuphi umchiza okhoyo kukutya okutyileyo. Yandule ke inkqubo yemithambo-luvo esemathunjini ithumele iienzymes ezifanelekileyo ukuba zicole oko kutya kube kuncinci kakhulu, umzimba ukwazi ukukusebenzisa. Le nkqubo, ikwadlala neyona ndima ibalulekileyo ukuqinisekisa ukuba iiasidi neminye imichiza esemzimbeni ikumlinganiselo ofunekayo, ize ithumele iienzymes zokucola ukutya kuloo ndawo zifuneka kuyo.
Inkqubo yokucolwa kokutya singayifanisa nomzi-mveliso, umphathi wawo yinkqubo yemithambo-luvo esemathunjini. Le “ngqondo yakho yesibini” ibangela ukuba izihlunu ezisemathunjini zimane zivaleka ziphinde zivuleke ukuze ukutya kungami ndawonye. Le nkqubo yiyo eyalathisa izihlunu ukuba zivale zize zivuleke kangakanani ukuze ukutya kuzihambele nje kakuhle, njengamabhanti omatshini ahambisa iibhokisi okanye iincwadi kumzi-mveliso.
Inkqubo yemithambo-luvo esemathunjini iyasikhusela. Ukutya okuginyayo kusenokuba neentsholongwane eziyingozi. Mhlawumbi yiyo loo nto iiseli ekuthiwa ziilymphocyte, ezidlala indima enkulu ekukhuseleni umzimba, zifumaneka kakhulu emathunjini! Ukuba uye waginya izinto ezineentsholongwane eziyingozi, le nkqubo ikhusela umzimba ngokuthi ibangele izihlunu zivuleke zize zivaleke ngamandla, nto leyo ebangela ukuba uzigabhe ezo ntsholongwane okanye uhambise.
Nakuba le nkqubo yemithambo-luvo isemathunjini ingaxhomekekanga kwingqondo ukuze yenze umsebenzi wayo, iyasebenzisana nengqondo. Ngokomzekelo, ikhupha incindi yamadlala ukuba iyokuxelela ingqondo ukuba ulambile ibe umele utye kangakanani ukuze uhluthe. Le nkqubo ineeseli ezixelela ingqondo xa uhluthi ize ibangele nokuba ube nesicaphucaphu xa uqhubeka usitya.
Kwanangaphambi kokuba ufunde eli nqaku, mhlawumbi ubukhe ucinge ukuba kukho ukusebenzisana okukhoyo phakathi kwenkqubo yokucolwa kokutya nengqondo. Ngokomzekelo, ukhe uqaphele ukuba xa utye ukutya okunamafutha amaninzi uye uzive ngathi udlamkile? Abaphandi bathi le nto yenzeka xa le nkqubo ithumela engqondweni ukuba ‘wonwabile,’ ize ingqondo iqalise ukukwenza uzive wonwabe nyhani. Mhlawumbi yiyo le nto abantu bethanda ukutya izinto ezimnandi xa benestres. Oososayensi bazama iindlela zokusebenzisa le nkqubo xa benyanga umntu onedepression.
Kukho nenye indlela esebenzisana ngayo ingqondo nenkqubo yokucolwa kokutya. Xa ichazwa kuthiwa kukuxuxuzelelwa sisisu. Uye uzive ngale ndlela xa le nkqubo isemathunjini inqanda ukuza kwegazi esiswini, le nto yenzeka xa ingqondo ixinezelekile okanye unestres. Naxa unesicaphucaphu usenokuxuxuzelelwa sisisu, kaloku xa unestres ingqondo ithumela inkqubo yemithambo-luvo esemathunjini ukuba itshintshe indlela avaleka ngayo amathumbu. Iingcali zithi, kusenokwenzeka ukuba le nto kuthiwa kukubethelwa inokubangelwa kukunxibelelana kwengqondo namathumbu.
Nakuba inkqubo yemithambo-luvo esemathunjini isenokubangela kwenzeke konke oku, kodwa ayikwazi ukukucingela okanye ikwenzele izigqibo. Ngamany’ amazwi, le nkqubo asiyongqondo. Soze ikuncede ubhale ingoma, wazi imali yakho esebhankini okanye wenze umsebenzi wesikolo. Sekunjalo, indlela entsokothe ngayo le nkqubo isabamangalisa nangoku oososayensi, ziseninzi nezinto ezingekaziwa ngayo. Ngoko, xa uza kutya, uzucinge ngayo yonke into eye yaqala yenzeka kuwe ngaphakathi kuquka nokusebenzisana okuza kwenzeka xa kucolwa oko kutya!